Ụbọchị My Pet » Olee otú A Nwoke Job nwere ike ekpughe Ya ihunanya Ụdị Mmadụ
Na na na, otú ị maara otú Eluigwe e ji mee ihe maka afọ na-amata àgwà na ịkọ ndakọrịta dabere na itinye n'ọnọdụ nke mbara ala?
... Na ihe dị ka mgbe ị na-amụ ma na-ma ị na-a "mmiri ịrịba ama" ma ọ bụ a "anyanwụ ịrịba ama?"
Ọfọn, M na mepụtara usoro yiri nke ahụ na-adabere a Ihọd si gig.
Nke ahụ dị mma: ya akara nke na-arụ ọrụ nwere ike na-egosi ma ọ bụ abụọ n'ime unu ga-"ọrụ" na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na mating arena.
Ọ bụ ezie na usoro nwere ike ghara ịbụ nnọọ "na nkà mmụta sayensị,"Ndaba na-adabere sara mbara chọpụtara, ntule, nkọwa, ajụjụ ọnụ na iwepụta oge na-na ole na ole akwukwo ubi "oke."
Ọ bụrụ na ị na-achọ ime ụfọdụ n'ime ihe ndị maa ọrụ onye na-ọma jikọọ na, na-adịgide adịgide results, na-agụ ma na-aṅa ntị.
Edemede na-ede abụ uri (The artsy ụdị)
Ndị mmadụ na-achọkarị kwuwe, ihunanya, na ikere òkè. Ha na-ahụ ilu iko dị ka ọkara zuru. Ha na-na na-akwa conversationalist, na n'ezie fun fechapụta na. Ha na-na nwoke version gị enyi kasị mma. Ma, kpachara anya: ndị a "free mmụọ" nwere ike ụfọdụ na-nkwa phobic na-apụ n'anya.
Ọ bụrụ na ị na-akpa a nkụzi, ịkwaga isi nke klas.
Ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ wezụga ndị na-achị, ndị ikom na-ezi ihe a na ụdị, ndidi, mma na ụmụ anụmanụ na ụmụ, na-a "ngwa ngwa ọmụmụ." Tinye ka a bụ eziokwu na ha na-akwa multi-taskers na n'elu nkezi echiche nkà.
ACCOUNTANTS na nọmba CRUNCHERS
Men a, Atiya ndị na-emekarị na-achọghị mgbanwe ụdị. Ị nwere ike "gụọ" na ndị a na cuties a zuru ezu gbakwasara, n'oge, na ego pinchers nakwa. Ha nwere anara ụkpụrụ. Ọ bụrụ na ị n'ime oké ọchịchọ, ogologo-igosipụta, bara uru ụdị, ị ga-enwe obi ụtọ n'ebe a.
Uwe ojii, Ọrụ mmenyụ ọkụ, Na nwoke nọọsụ
Gịnị nwanyị anaghị amasị ka a "napụta?"Ụmụ okorobịa na ndị a ubi na-mara ịbụ dimkpa, na-echebe, ikikere, na-elekọta. Ma m kwuru banyere ha na-na-emekarị na-ezi ahụ ọnọdụ? Ọtụtụ na-nnọọ ndị dabeere na, na a n'echiche nke nsọpụrụ na ibu ọrụ.
Ị ga-ahụ na ha na-abụ "hà ka" mmekọ na mmekọrịta.
Ị ga pịa ndị a na ibe ọ bụrụ na ị ezi uche, asian, introverted, ma na-ezi nsogbu solvers; na ha dị oke.
IHE-adịghị ala ala na-enweghị ọrụ
Ka ihu ya, anyị nile maara ma ọ bụ na e dere na onye a, Atiya.
Ya "ọrụ" na-moonlighting dị ka a n'ihe ndina nduku.
Ebe a bụ edemede.
Ọ ka na-agbalị "chọta ya." Ma ọ bụ, mgbe ala na ya chioma. Ma ọ bụ ka na-agbalị na-achụso nrọ ya nke ịbụ a nkume kpakpando na iri atọ. Right? Ọ bụrụ otú ahụ, nwere ike ị chọrọ tụlee nhọrọ gị na "pink ileghara" ya n'oge na-adịghị.
Acha anụnụ anụnụ na olu akwa VS. OLU AKWA ỌCHA–Nke dị mma?
Mkpebi, mkpebi. Gịnị bụ a nwa agbọghọ na-eme?
Ọ bụ na ọ ka mma na-akpa a-acha anụnụ anụnụ olu akwa nwoke ma ọ bụ a olu akwa ọcha cutie?
Ọfọn, ya niile na-adabere.
Ebe a bụ 4-1-1.
Blue olu akwa ụmụ okorobịa na-ala n'ụwa na ezi na ha aka. Ha na-na-emekarị adị mfe na, na egos na ego. Buturu, ha na-n'ozuzu ọzọ tọrọ azụ.
White olu akwa ụmụ okorobịa ọtụtụ ugboro nwere ukwuu ịkpata nwere, agbasaghị inwe ụbụrụ, na na nnukwu nsogbu solvers.
Ọ bụ ezie na ndị a na-adịghị ike ma na ngwa ngwa iwu, ị ga-ahụ na ha na ọdabara ka ọtụtụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọnọdụ. Ihe ọ bụla ị na-eme, họrọ amamihe.
Ka emechara, ịhụnanya bụ mkpa "azụmahịa."